zomkhosi kaNcibijane nokunye okuhle ukuthi kukhona umoya amahlaya, kumnandi, Raffles. Abathakathi nabathakathi musa sesabe, Pirates bamenyiwe ukudansa abadelelayo "apula", I Snow Queen is niyeke ukusongela noma ubani iqhwa futhi onogwaja nezimpisi ndawonye kuholele nemidanso emhlabeni sikakhusimusi kukhishelwa!
imvunulo Pirate, mhlawumbe omunye ethandwa kakhulu phakathi kokubili abafana namantombazane, kusukela ngineminyaka engu-engadini ziphethe ingane isilinganiso. Nge ubuncane ngezimali ezazidingeka inikeza amathuba elanele emcabangweni wakho. Futhi ukwenza lokhu ingubo kungaba nengane yakho! Yini ezihlongozwayo kulesi sihloko - liyinketho eyodwa nje kuzo inqwaba amathuba. Yiba zokudala futhi iya kuyo!
Ngakho, esikudingayo? Okokuqala, ibhantshi. Yiqiniso, kolwandle yangempela, ngisho ubukhulu kwesokudla okunzima ukubathola. Akunandaba. pirate imvunulo kungenziwa, uma uthenga ezimthende ihembe, sweatshirt, isikibha. Umbala emapheshana kungaba ezahlukene: abamhlophe nabansundu, omhlophe noluhlaza okwesibhakabhaka, omnyama obomvu ... Akubalulekile ukuthobela isiko, into esemqoka - ukugcina isitayela. Konke lokhu kalula itholakala ngasiphi emakethe zigcwele, futhi angase abe ngisho wezigqoko wengane yakho. Ukuze "Vest" nasheyte patch eziningana ebabazekayo - kuyokunikeza elikhuhluziwe esizayo ndawonye. Futhi uma esikhundleni ivesti oyisebenzisayo ihembe kasilika noma ihembe ezinemibala egqamile - obomvu, ophuzi - pirate yakho yokugqoka zithole schogolsky umthunzi e umoya Jack Sparrow!
Okwesibili, Vest. umbala kwakho kuncike umbala into yezembatho odlule. Material - shiny, isib, nosilika. Red, omnyama, luhlaza - ukuthi ukhona, bese usebenzisa Into esemqoka ukuthi akuyona ihlanganiswe ne ihembe noma ibhantshi. Ukuze ekholisa ngokwengeziwe ukuthi lokhu imvunulo pirate, ngemuva, ungenza bendabuko ukuphrinta - skull namathambo. Uma uwumnikazi wenkampani hhayi uxolo, isicelo esiliva upende iphethini. Kodwa kulula ukudweba wabuka futhi sheathe SikaKhisimusi imvula yabo noma namathisela phezu confetti shiny. amalogo elincane efanele futhi zingafakwa phezu lapels phambi.
Okwesithathu, zomkhosi pirate imvunulo is kwahambisana by imininingwane efana ibhande - lesikhumba ububanzi namaqhosha futhi bopha ezinkulu, futhi mhlawumbe ucezu impahla, mhlawumbe okukhanyayo, okumele abe laqina okhalweni. Suit futhi u-cravat - esikhanya kakhulu, stylish. Shona ungakwazi tie Bandana. izindandatho utungelete ambalwa amavolovolo (ukuboleka abangane abanezingane, noma ngisho ukubheka phakathi impahla yabo endala) bese usika amakhadibhodi noma plywood futhi zaveza ngokufanele angababulali.
Ngaphezu kwalokho, ibhulukwe. Uma suit ngoba intombazanyana ke uvumelane nebhulukwe tight noma leggings, ukunqampunwa jeans kuya maphakathi no-ithole. Bangaphinde kubangele izimpawu pirate, ebeka wabakhipha kukhanya confetti, futhi unga izicubu nje endaweni ethile kancane overstrained. By the way, imbobo jeans - elibalulekile zokuhlobisa, futhi izinto eziningi kuleli fomu futhi ithengiswe. Ephambi kwezinduna amantombazane amabhulukwe tight kungase ihembe, ihembe noma ibhantshi ukugqoka ibhulukwe. Enye - ibhulukwe lwavutha kusukela phezulu kuya phansi noma nge ruffles, flounces (nasheyte bebodwa). Girls Ungashintshanisa ibhulukwe iDemo iziketi ezimnyama ku imikhono nge ruffles, ezifincizekile ezifana nezimpiko noma jeans ngqo. Thola fresh, yokuqala, stylish.
New pirate imvunulo ubukeka kahle nge jackboots. Ngesikhathi engekho, ungasebenzisa noma yikuphi amabhuzu, amabhuzu.
Futhi manje siphethe ngokuthi imininingwane yethu bellicose isithombe sikhulise imvunulo namanje zemikhosi. Isiqeshana indlebe ufuna ukufaka ezinkulu, ulingisa isiliva noma igolide. Fingers - a amasongo ambalwa ubucwebe kamama. Ngokuphawulekayo, uma uthola uchungechunge enkulu "segolide" noma "isiliva" futhi jewelry kamama yokusungula. Futhi iso patch - ke zingathengwa esitolo esigabeni isipho noma ukuzenzela okwakho. Isihlathi amafu amapensela yezimonyo , Udweba ihange ezindebeni zakhe - romping amadevu. Futhi umnumzana emangalisayo lakho inhlanhla zasolwandle ukulungele igagasi uNcibijane iholide!
Wish Tree - thatha isinyathelo maqondana ukugcwaliseka izifiso. Indlela isihlahla izifiso?
Somen Poltava - le-volleyball omkhulu Russian